Etiopiana Mpanao Gazety Mihantsy Ny Lalàna Hiadiana Amin’ny Fampihorohoroana · Global Voices teny Malagasy
Etiopiana Mpanao Gazety Mihantsy Ny Lalàna Hiadiana Amin'ny Fampihorohoroana
Voadika ny 16 Novambra 2013 18:36 GMT
Nametraka fitoriana mikasika an'i Etiopia tany amin'ny Kaomisiona Afrikana Misahana Ny Maha-olona sy ny Zon'ny Vahoaka ( African Commission on Human and Peoples’ Rights) ilay Etiopiana mpanao gazety zokiolona no sady bilaogera Eskinder Nega ary ilay mpanao gazety anaty Aterineto Reeyot Alemu, mihantsy ny fanamparam-pahefana misy eo amin'ny firenena mikasika ny lalàna “hiadiana amin'ny fampihorohoroana”, izay manafoana ny fahalalahana maneho hevitra. Samy Voaheloka araky ny
Eskinder Nega sy ramatoa vadiny Serkalim Fasil. Sary nampiasaina nahazoana lalalàna tamin'ny tompony
fanambàrana tamin'ny 2009 Manohitra ny fampihorohoroana any Etiopia izy roa ireo, noho ireo fanontaniana henjakenjana napetrak'izy ireo mikasika ireo politikan'ny fitondrana – -Noho ny fanatanterahany ny asany amin'ny maha-mpanao gazety azy anefa. Ankehitriny, Migadra mandritra ny 18 taona i Andriamatoa Nega ary 5 taona kosa no anjaran'i Ramatoa Alemu. Roa monja tamin'ireo toe-draharaha marobe ambaran'ny fitsarana mikasika ny “ady amin'ny fampihorohoroana” eo amin'ny firenena, no nanenjehana azy ireo.
Iray amin'ireo firenena maro nandany lalàna miady amin'ny fampihorohoroana i Etiopia, mianga avy amin'ny lalàna mivelatra izay mikendry manokana ny politikan'i Etazonia. An-jatony ny mpanao gazety sy ireo feo hafa avy amin'ny mpanohitra ao amin'ny firenena no voaarakaraka vokatry ny lalàna hadiana amin'ny fampihorohoroana, nanomboka tamin'ny fotoana nidirany hanan-kery ny taona 2009. Miaraka amin'ny fidadasiky ny fampiharana azy, izay mahatonga ny asa fanaovana gazety ho toy ny heloka bevava, ho fanombohana dia nampiasaina ilay izy ho toy ny fitaovana mahomby hanaovàna famoretana ny mpampahalala vaovao malalaka, anaty vanim-potoana tsy natao ho an'izany velively.
Nanakilasy an'i Etiopia eo amin'ny laharana faha-137 amin'ny firenena 179 tao amin'ny World Press Freedom Index ny taona 2013, mikasika ny fahafahana maneho hevitra malalaka eran'izao tontolo izao ny RSF (Reporters sans frontières), latsaka any amin'ny laharana 10 talohan'ilay nisy azy tamin'ny taona 2012. Araky ny nambaran'ny Kaomity Natao Hiaro ireo Mpanao gazety, maro ireo mpanao gazety avy ao Etiopia no nandositra nanao sesitany ny tenany ny taona 2011 raha oharina amin'ireo firenen-kafa eran'izao tontolo izao, ary teo anelanelan'ny taona 2008 sy 2013, mitontaly 45 ireo mpanao gazety nandeha nanao sesitany ny tenany avy ao amin'ilay firenena. Miatrika antsojay matetitetika ireo mpanao gazety sy ireo mpikambana avy amin'ny antoko politika mpanohitra, indrindra fa raha fanakianana fitondrana ny fandrakofam-baovao ataon'izy ireo. Ny fanaovana sivana ny tena no vokatra tonga ho azy avy amin'io toe-draharaha io.
I Eskinder Nega sy Reeyot Alemu no roa amin'ireo mpanao gazety voahenjika araka ny fanambàrana tamin'ny 2009 Manohitra ny fampihorohoroana. Amin'Andriamatoa Nega, ilay mpamorona ireo famoaham-baovao marobe tsy miankina any Etiopia, izay efa samy nakàtona avokoa ankehitriny, efa fanimbalony izao no nisetrasetran'ireo manampahefana taminy noho ny asany. Miaraka amin-Ramatoa Alemu, mpanonta vaovao ara-politika ho an'ny gazety tsy miankina iray Feteh, izay voarara ankehitriny, ary koa, sady mpandray anjara tsy tapaka amin'ny famoahana ireo vaovao anaty aterineto Ethiopian Review, dia mihantsy ny mpanao lalàna izy ankehitriny izay nanoratany fanehoankevitra feno fanakianana teo aloha, izay nametrahany fanontaniana mikasika ny fomba fampiasàna ny lalàna ho enti-managadra ireo mpanao gazety.
Reeyot Alemu. Sary nahazoana alalàna avy amin'ny tompony.
Mitaky ny Kaomisiona afrikana ny fangatahan'izy ireo ny mba hitondràna ny raharaha eo anatrehan'ny Fitsarana afrikana mikasika ny Maha-olona sy ny Zon'ny Vahoaka (African Court on Human and Peoples’ Rights), izay mety hamoaka fanapahan-kevitra tsy azo ihodivirana ho an'ny fitondrana Etiopiana. Ilaina io, hoy ny fanamafisan'izy ireo, satria ny raharahan'izy ireo dia ohatra iray monja amin’ ireo mpanao gazety maro hafa, ireo mahery fo sy ireo mpanohitra ara-politika izay enjehina ho toy ny “mpampihorohoro”. Eo anatrehan'ny Lalàna afrikana, manana fahefana ny Komisiona hitondra ireo olan'ny “fanitsakitsahana henjana na faobe” ireo zon'olombelona ho eo amin'ny Fitsaràna. Navoitran'ny fitoriana nataon'Andriamatoa sy Ramatoa Alemu Nega fa voalaza ao anatin'io ny fanenjehana avy hatrany ireo izay mitsikera ny fitondrana.
Tena fahasahiana lehibe ny fanapahan-kevitr'izy ireo mihantsy ny fitondrana Etiopiana. Hatramin'ny namonjàna azy ireo, nizaka ny vokatry ny fanehoana ny zavatra mihatra aminy sy mihatra amin'ny hafa ireto mpanao gazety ireto. Samy tsy mahazo vangiana, na i Andriamatoa na i Ramatoa Alemu Nega , ary norahonana ho hatoka-monina i Ramatoa Alemu.
i Nani Jansen izay avy amin'ny Media Legal Defence Initiative, Patrick Griffith avy ao amin'ny Freedom Now ary Korieh Duodu avy ao amin'ny Lincolns Inn no nisolo vava an'Andriamatoa Nega sy Ramatoa Alemu teo anatrehan'ny Kaomisiona Afrikana. Ny 22 Oktobra-5 Novambra 2013 any Banjul, Gambia no fotoam-pitsarana manaraka ho an'ny Kaomisiona afrikana.